Doorashadii ugu Adkeyd oo ka dhacday Jowhar +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Doorashadii ugu Adkeyd oo ka dhacday Jowhar +Sawirro
Waxaa goordhaw magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ka dhacday doorasho aad u adag oo loogu tartamayay aqalka hoose ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Doorashada maanta oo aheed mid aad u xiiso badneed ayaa u dhaxeysay labada Musharax ee kala ahaa Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali iyo Muxiyadiin Xasan Jurus oo taageero badan ka helayay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya.
Xildhibaan C/qaadir Cosoble ayaa doorashadii dhacday ku guuleestay waxa uuna helay codad gaaraya 34 cod, halka Muxiyadiin Xasan Jurus uu helay 17 cod, waxaana doorashadan aheed mid xiiso gaar ah laheed.
Labada Musharax ayaa intii ay ololaha wadeen waxa ay ku bixiyeen lacag aad u badan, waxaana doorashadan ka taagneed muran xoogan oo ka dhalatay ergada dooraneysay kursigan ay laheed Beesha Warsangali Abgaal.
Xildhibaan C/qaadir Cosoble ayaa kamid ah Musharaxiinta u taagan doorashada Madaxweynaha Soomaaliya , waxaana Xildhibaankan lagu xasuustaa in uu kaalinta sadexaad ka galay doorashadii sanadkii 2012-kii dhacay.